Maitiro Ekutangisa Isingabatsiri Sangano - Tsananguro & Mienzaniso
Masangano asina rubatsiro zvinoumbwa kuitira kuitisa zviitwa nekutengesa kune zvimwe zvinangwa kunze kwekuwana mugove wemari, asi panguva imwechete ichipa chengetedzo imwechete yemidziyo uye zvikwereti zvakaganhurirwa zvekambani yakajairwa. Sangano risingabatsiri rinogona kuita purofiti, asi purofiti iyi inofanirwa kushandiswa zvine hungwaru kuendesa zvinangwa kwete kupa mari inowanikwa (nenzira yezvikwereti) kune avo vanogovana navo. Izvo zvinonzwisiswa kuti mazhinji ekutengeserana uye zviitiko zveNonprofit Corporation hazvizove zvekutengeserana mune zvakasikwa.
Asingabatsiri Masangano Mapoka
Sangano risingabatsiri rakarongwa pasi pe501 (c) 3 yeInternal Revenue Code rinofanira kuwira mune chimwe kana zvinopfuura zvezvikamu zvinotevera.
Kuedza kuchengetedzwa kwevanhu
Kukurudzira makwikwi emitambo yenyika kana epasirese
Kudzivirira hutsinye kuvana -
Kusanganisira, nekuda kwezvakadai, kugadzirwa kwemasangano anokodzera semasangano asingabhadharwe pasi pechikamu 501 (c) (3) yeInternal Revenue Code, kana chikamu chinoenderana nechero ramangwana remutero remubatanidzwa.
Kufananidza kweMasangano Asingabatsiri uye Ezvibatsiro
Nyanzvi zhinji dzinofunga kuti ndiyo mitemo yepamutemo neyetsika pakugoverwa kwemubhadharo kuvaridzi kana varidzi vemasheya izvo zvinonyanya kusiyanisa zvisina purofiti kubva ku "kwebhizimusi, kana mabhizinesi ekutengesa. Izwi rakanyatso tsanangura masangano mazhinji asingabatsiri ndere 'kwete-purofiti', pane kuti 'risingabatsiri', uye izvi zvinowanzo shandiswa mumitemo nezvinyorwa.
Masangano asingabatsiri kazhinji haashande kuti awane purofiti, hunhu hunoratidza masangano akadaro. Nekudaro, sangano risingabatsiri rinogona kugamuchira, kubata nekupa mari nezvimwe zvinhu zvekukosha, uye rinogona zvakare kutengeserana zviri pamutemo uye zvine mutsigo purofiti, chero chirevo chekuti chero purofiti inogadzirwa ichazoshandiswa kufambisa chinangwa chayo, chinangwa kana chinangwa yakanamatira. Iyo papi iyo yainogona kuburitsa mari inogona kumanikidzwa, kana kushandiswa kweiyo purofiti kunogona kutamirwa. Asina purofiti saka anowanzo kupihwa mari nezvipo kubva kune yakazvimirira kana yeruzhinji chikamu, uye kazhinji vane mutero unoregererwa mutero. Mipiro yega yega dzimwe nguva inogona kubvisirwa mutero.
Pamusoro pezvo, sangano risingabatsiri rinogona kuve nenhengo kupesana nevanogovana.
Zvinangwa neMisheni zveiyo Isina-purofiti Corporation
Masangano asingabatsiri kana makambani kazhinji anobatsira kana masangano ebasa; vanogona kunge vakarongeka sesangano risiri-rekuita purofiti kana sechivimbiso, mushandirapamwe, kana vanogona kunge vasina kurongeka. Dzimwe nguva dzinodaidzwawo kunzi nheyo, kana zvipo izvo zvine hombe yemari yemari. Nheyo dzakawanda dzinopa zvipo kune mamwe masangano asingabatsiri, kana kuyanana kune vanhu. Nekudaro, iro zita nheyo dzinogona kushandiswa nechero ipi isiri-yezvinobatsira mubatanidzwa - kunyangwe masangano ekuzvipira kana euswa midzi mapoka.
Iyo isingabatsiri inogona kunge iri rakasununguka rakarongeka boka, senge block block kana mubatanidzwa wevashandi, kana inogona kunge iri yakaoma chimiro senge yunivhesiti, chipatara, zvinyorwa zvinyorwa zvemafirimu kambani kana redzidzo bhuku rebhuku.
Munyika zhinji dzinoshandisa mutemo weGerman kana weNordic (semuenzaniso Germany, Sweden, Finland), masangano asingabatsiri kazhinji masangano ekuzvidira, kunyangwe mamwe aine mamiriro emakambani (semuenzaniso makambani edzimba). Sangano rekuzvidira rinowanzovambwa pamisimboti yemunhu mumwe - vhoti imwe. Sangano rakakura, repasirese-nyika rinowanzo rongwa sedare: padanho repasirese rine musangano-kana wedunhu-chikamu chehukama nehunhu hwemunhu, aya masangano ari nhengo dzesangano renyika. Izvi zvinofungidzirwa kuzadzikisa kuzvimiririra kwenzvimbo dzemuno-nhanho, nepo zvichiri kungodzivirira mubatanidzwa kubva kumatare epamutemo kana emari yesangano chero ripi zvaro. Kurongeka kwemaligi akadaro (semuenzaniso mubatanidzwa wevashandi kana pati) kunogona kuomarara zvakanyanya. Iko kunowanzo kuve nemitemo yakaparadzaniswa inodzora zvakajairika, masangano e "idealist" (chero chinhu kubva kukirabhu yemitambo kuenda kusangano revashandi), mapato ezvematongerwo enyika nemasangano ezvitendero, achirambidza mhando dzese dzesangano kumunda wayo wakasarudzwa.
Mhando dzeMasangano Asingabatsiri
Kune maviri marudzi emakambani asingabatsiri: nhengo dzemakambani nemasangano anobatsira. Izvo zvinodikanwa kusiyanisa pakati pemhando mbiri nekuti mabasa eimwe neumwe anosiyana.
Nhengo yenhengo inotakura zviitiko zvinoitirwa kubatsira nhengo dzayo. Inotsigirwa nenhengo dzayo kuburikidza nemari, zvipo, zvikwereti kana chero mubatanidzwa weizvi. Mienzaniso yenhengo dzemakambani makirabhu egorofu, makirabhu enharaunda, masangano anokosha, masikati, nezvimwe.
Sangano rinopa rubatsiro rinoita zviitiko zvinoitirwa kubatsira veruzhinji. Inogona kukumbira mipiro kubva kuruzhinji, kugamuchira mari yehurumende inopfuura gumi muzana yemari yainowana pagore kana kunyoresa sechipo mukati mezvinoreva mutemo weRubatsiro.
Rangarira, ese maviri marudzi emakambani ane nhengo. Sangano harisi nhengo yememba nekuti rine nhengo; sangano rerubatsiro rine nhengo zvakare. Nhengo dzesangano chero ripi zvaro risingabatsiri, nhengo kana rubatsiro, vane chinzvimbo chakafanana nechavo vagovani vebhizinesi rebhizinesi, uye vanowanzo kupihwa.
Misiyano mikuru pakati penhengo yemubatanidzwa nesangano rerubatsiro ndeiyi:
ndiani anobatsirwa nezviitwa (nhengo kana veruzhinji);
uyo anotsigira sangano nemari; uye
kuti zvakawandisa zvinogoverwa sei pakuparara
Nyaya Dzemutemo dzekufunga nezvadzo
Nyika zhinji dzine mitemo yega yega inogadza kumisikidzwa, chimiro, uye manejimendi emakambani asingabatsiri. Izvi zvakafanana kune nyika dzakasiyana: mazhinji ane mitemo inodzora kumisikidzwa uye manejimendi emasangano asingabatsiri, uye ayo anoda kutevedzwa nehutongi hwehutongi. Masangano mazhinji akakurisa anodikanwa kushambadza yavo mishumo yezvemari inotsanangudza mari yavo nemari yavaishandisa kuruzhinji. Kunyangwe zvakanyanya kufanana nebhizinesi, kana kuita-purofiti, masangano, anogona kusiyana pamatanho akakosha. Ese ari maviri asingabatsiri uye epamubatsiro masangano anofanirwa kuve nenhengo dzemabhodhi, nhengo dzedare rinotungamira, kana matirastii ane chikwereti kusangano rekuvimbika uye kuvimba. Chinhu chinozivikanwa kunze kweichi chinosanganisira machechi, ayo kazhinji asingadikanwe kuzivisa mari kune chero munhu, kunyangwe nhengo dzayo kana hutungamiriri hukasarudza.
Maitiro Ekuumba Iyo Isingabatsiri Sangano
MuUnited States, masangano asingabatsiri anowanzoumbwa nekubatanidza mudunhu ravanotarisira kuita bhizinesi. Chiitiko chekubatanidza chinogadzira chakasarudzika chepamutemo chinogonesa iro sangano kuti ribatwe sekambani pasi pemutemo uye kupinda mumabhizimusi ekutengeserana, kuumba zvibvumirano, uye kuve yako pfuma sezvingaitwa nechero mumwe munhu kana mubatsiri webhizimusi.
Zvakawanda senge chiyero, che-purofiti mubatanidzwa, isingabatsiri inogona kuve nenhengo kunyangwe vazhinji vasina. Iyo isingabatsiri inogona zvakare kuve trust kana mubatanidzwa wenhengo, uye sangano rinogona kudzorwa nenhengo dzaro dzinosarudza Bhodhi revatungamiriri kana Bhodhi reMatirastii. Asina purofiti anogona kuve neanomiririra mamiriro ekutendera kumiririrwa kwemapoka kana makambani senhengo. Neimwe nzira, inogona kunge iri isiri-nhengo yesangano uye bhodhi revatungamiriri rinogona kusarudza avo vanotevera.
Musiyano wekutanga pakati peasina purofiti nekambani inoitira purofiti ndeyekuti isingabatsiri haina kuburitsa masheya kana kubhadhara zvikwereti, (semuenzaniso, Iyo Code yeCommonwealth yeVirginia inosanganisira iyo Isiri-Stock Corporation Mutemo unoshandiswa kuisa masangano asingabatsiri) uye inogona kusapfumisa vatungamiriri vayo. Zvisinei, semakambani anoita purofiti, asingabatsiri anogona kunge achine vashandi uye anogona kubhadhara vatungamiriri vavo mukati memiganhu inonzwisisika - asi izvi zvinofanirwa kunge zviri, sezvazviri kumakambani anoita purofiti, zvakanyatsonyorwa uye zvichichengetwa mumaminetsi emakambani kana rekodhi rekambani.
Mutero Wokuregererwa Mamiriro
Munyika zhinji, zvisina purofiti zvinogona kunyorera mutero usingabhadharwe mutero, kuitira kuti vanopa mari vadzokere mutero wemubhadharo wakapihwa pamipiro uye kuti sangano pacharo ribvisirwe mutero wemari. MuUnited States, mushure mekunge sangano rinozivikanwa repamutemo raumbwa padanho rehurumende, itsika kune iyo isingabatsiri kambani kutsvaga chinzvimbo chekuregererwa mutero zvine chekuita nemutero wemari. Izvo zvinoitwa nekunyorera kune Yemukati Revenue Service (IRS). IRS, mushure mekuongorora chikumbiro ichi kuona kuti chinangwa chesangano chinosangana nemamiriro ekuti chizivikanwe sesangano risingabhadharwe mutero (senge charipo), rinopa tsamba yemvumo kune isingabatsiri kuripa mutero unoregererwa mutero wemitero. Kuregererwa hakushandi kune mamwe maFederal tax senge emitero yebasa.
Nyaya Dzakatarisana Neasina purofiti
Operational Capacity rutsigiro idambudziko riri kuenderera rakatarisana neasina purofiti anovimba nemari yekunze kuti vachengetedze mashandiro avo, zvikuru nekuti masangano asingabatsiri haana simba pamusoro pezvavanowana zvemari. Kuwedzera muUnited States, mazhinji asingabatsiri anovimba nemari yehurumende kutsigira mashandiro avo, kazhinji kuburikidza nezvipo, zvibvumirano, kana rubatsiro runotsigirwa nevatengi, senge mavocha kana zvikwereti zvemitero. Maitiro emari akakosha mukuita uye kukura kwesangano risingabatsiri sezvo ichikurudzira kuvimbika kana kufungidzira izvo sangano rinokwanisa kuhaya nekuchengetedza vashandi, kuchengetedza zvivakwa, kana kugadzira zvirongwa.
Yakabudirira Isina-purofiti Mienzaniso
Masangano makuru uye akabudirira asingabatsiri munyika anowanikwa muno muUnited States: Bill naMelinda Gates Foundation, uye Howard Hughes Medical Foundation, imwe neimwe inomiririra zvipo zvemadhora mabhiriyoni makumi maviri nemadhora gumi nemana emadhora, zvichiteerana. United Kingdom inouya mune yechipiri yakasimba neBritish Welcome Trust, inozivikanwa se "charity" n kushandiswa kweBritish uye mazwi. Izvo zvakakosha kuti uzive kuti idzi fananidzo dzinosanganisa maUniversity, mazhinji acho ariwo akaumbwa semakambani asingabatsiri uye mamwe ane mutengo unopfuura makumi emabhiriyoni emadhora.
Yakataurwa semienzaniso pazasi mashoma anozivikanwa kwazvo, uye muzviitiko zvakawanda, anoremekedzwa kwazvo, asingabatsiri makambani nemasangano:
Better Business Business Bureau
Vakuru Vakoma Vakoma Vakuru veAmerica
MwanaVoice Wepasi Pese
Iyo Yakachengetedzwa Kwezvisikwa
Iyo Rotary Foundation
Mazwi evakadzi. Vakadzi Vhoti
* (Nyaya inozivikanwa kwazvo yekutengesa / zita remakambani kutyorwa kunosanganisira iyo World Wildlife Fund uye iyo World Wrestling Federation (yaimbova mubatanidzwa isingabatsiri uye yekupedzisira bhizinesi rekuita purofiti) zvakakonzera kurasikirwa mudare rekodzero yezita " WWF ”neWorld Wrestling Federation –vachinja zita ravo rakapfupikiswa kuva“ WWE ”)
Pamusoro pezvo, kune mamwe mamirioni emasangano madiki asingabatsiri ayo anopa rubatsiro rwemagariro kana hunyanzvi kuvanhu pasirese. Kune zvinopfuura mamirioni 1.6 zvisingabatsiri muUnited States moga. Kune zvakawanda ona zvinyorwa zveWikipedia pamasangano asingabatsiri
Mazhinji emakambani asingabatsiri kana masangano anoshandisa iyo ".org" yepamusoro-chikamu domix pavanosarudza zita rezita kuti vazvitsauranise kubva kune mamwe mabhizimusi anotarisisa ayo anowanzoshandisa iyo ".com" inonamira kana nzvimbo. Mune echinyakare madomeni madomasi sezvacherechedzwa muRFC 1591, ".org" inotaurwa seinoshandiswa ku "masangano asina kukodzera kumwe kunhu" muhurongwa hwemazita, uhwo kunyangwe husina kujeka, hunoreva kuti iboka rakakodzera revasiri -hurumende, asiri emakambani masangano. Izvo hazvina kunyatso kusarudzirwa masangano anobatsira kana chero yakatarwa yemasangano kana yemitero-mutemo mamiriro, zvisinei; inobatanidza chero chinhu chisingawire mune chimwe chikamu. Parizvino, hapana zvinorambidzwa zvinomanikidzwa pakunyoreswa kwe ".com" kana ".org," kuti ugone kuwana masangano emarudzi ese mune chero madomeni aya, pamwe nemamwe madomasi epamusoro anosanganisira matsva, akawedzera-akasarudzika ayo anogona inokodzera mamwe marudzi emasangano akadai se .museum yemamuseum. Masangano anogona zvakare kunyoresa pasi penzvimbo yakakodzera yenyika kodhi yepamusoro-chikamu dunhu renyika yavo. Kunyangwe paine chirevo chekushambadzira ichi, zvakakosha kuti kuonekwe kweasina-purofiti ivo vanonamatira kumusangano unomisikidza nekukurumidza uye vanoshandisa iyo ".org" yepamusoro-chikamu nzvimbo.
Masangano ane emunharaunda, ematunhu, kana emunyika zvitsauko anogona kuvapa subdomain kero mune yakasarudzika chimiro, senge california.example.org ye California state chitsauko, uye sanjose.california.example.org yeboka reSan Jose mukati meCalifornia chitsauko. Nekudaro, mune dzimwe nguva zvitsauko zvemuno zvinonyoresa zvakasiyana maseru sanjoseexample.org, iyo inogona kuburitsa kusaenderana muchimiro chemazita; kana vakasarongedza mazita avo, chimwe chitsauko chinogona kuwana zita risingaenderane senge muenzaniso-sanfrancisco.org.
Ndinofanira Kutanga Sangano Risingabatsiri?
Kana iwe uchifunga kuti bhizinesi rako riitise zviitiko nekutengesa kune zvimwe zvinangwa kunze kwekuwana nhengo mari, nepo panguva imwe chete uchipa zvakafanana kuchengetedzwa kwemidziyo uye zvikwereti zvakaganhurirwa zvekambani yakajairwa, ipapo iyo Isina-purofiti Corporation inonzwisisika kwauri. Rangarira kuti nepo iyo isiri-purofiti inogona kuhaya vashandi uye kubhadhara Mutungamiriri kana Executive Director muhoro unonzwisisika, haisi yekutengesa bhizimusi uye hakugone kuve nembairo kana kubhadharwa kunhengo.
Yakagadziridzwa Kuwedzeredzwa muna Kubvumbi 29, 2019